IiPirates eziPhezulu kunye neeFlagi
Ngaloo nto! 7 AmaPirati aMazwi kunye neeFlegi zawo
"UJolly Roger" Umoya Ophefumlelweyo Ehlabathini
Ngethuba leGold Age yobuPracy , ama-Pirates ayenokufunyanwa kuwo wonke umhlaba ukusuka e-Indian Ocean ukuya eNewfoundland, ukusuka e-Afrika ukuya eCaribbean. Amaqhawe awaziwa njenge-Blackbeard, "uCalico Jack" uRackham, kunye no " Black Bart " uRoberts bathatha iinqanawa ezininzi. Ezi ziqhumane zazihlala ziphethe iiflegi, okanye "iifake", ezazichazela kubahlobo kunye neentshaba ezifanayo. Iflegi yepirate yayivame ukubizwa ngokuba ngu "Jolly Roger," apho abaninzi bakholelwa ukuba yiNgqungquthela yeFrench french joge okanye "ebomvu." Nazi ezinye zezilwanyana ezidumileyo kunye neeflegi ezidibene nazo.
Ukuba uhamba ngomkhumbi kwiiCaribbean okanye ngaselunxwemeni yonxweme eMntla Melika ngo-1718 waza wabona iinqanawa ezijikeleza iiflegi ezimnyama ngeemhlophe ezimhlophe, ziphethe i-hoglasslass kwaye zibethe intliziyo, wawusenkingeni. Umthetheli wenqanawa kwakungekho nanye ngaphandle kukaEdward "Blackbeard" Fundisa , i-pirate eyona nto ingabonakaliyo kwisizukulwana sakhe. U-Blackbeard wayazi indlela yokuvuselela ukwesaba: ekulweni, wayeya kutshaya ukutshaya iifubhe kwiinwele zakhe ezimnyama kunye neendevu. Bayiya kumenza aphethwe ngumsi, amnike ukubonakala kwidemoni. Ifulegi yakhe yayesabisayo, nayo. Amagqabi atyhutyha intliziyo kuthetha ukuba akukho nxalenye yekota eya kunikwa.
UHenry "Long Ben" U-Avery wayenomsebenzi omfutshane kodwa onomdla njengophothi. Wayephinda athathe iinqanawa ezili-12 okanye kunjalo, kodwa enye yazo yayingekho ngaphantsi kweGanj-i-Sawai, iinqanawa zobuncwane beMoghul Grand of India. Ukubanjwa kwelo nqanawa kuphela kubeka i-Long Ben kwindawo okanye kufuphi noluhlu lwazo zonke iinqwelo ezidumileyo. Wanyamalala kungekudala. Ngokweengcamango ngelo xesha, wayemise ubukumkani bakhe, watshata intombi enhle yeMantla Moghul, kwaye wayenemfazwe yakhe yempahla yeenqanawa ezingama-40. Ifulethi ye-Avery ibonise i-kayiki egqoke i-kerchief kwiprofayili ngaphezulu kweembambano.
Ukuba uhamba ngokuphanga wodwa, uHenry Avery wayeyipirate ephumelele kakhulu yexesha lakhe, kodwa ukuba uhamba ngenani leenqanawa ezithathwayo, ngoko uBartholomew "uBlack Bart" uRober uyamxabisa ngeendlela zokuhamba. U-Black Bart wabamba iinqanawa ezingama-400 kwiminyaka yakhe emithathu yokusebenza, apho ayevela eBrazil waya eNewfoundland, kwiCaribbean nase-Afrika. Umnyama uBrazil wasebenzisa iiflegi eziliqela ngeli xesha. Omnye owayeqhelaniswe naye wayemnyama kunye nesigufi esimhlophe kunye nepirate emhlophe ephethe i-hourglass phakathi kwabo: oko kwakuthetha ukuba ixesha liza kuphuma kumaxhoba akhe.
I-Flag of Bartholomew "Black Bart" uRoberts, Icandelo lesibini
"AbakwaBlack Bart" uRoberts bazithiyile iinqithi zaseBarbados naseMartinique, njengabalawuli babo bekoloni bazama ukuthumela iinqanawa ezixhobileyo ukuze bazame ukumthabatha. Nanini na xa athabatha iinqanawa ezivela kuyo nayiphi na indawo, wayenomngcipheko omkhulu kumphathi kunye nabasebenzi. Wenza neflegi ekhethekileyo ukuba enze iphuzu lakhe: ifulegi emnyama kunye nepirate emhlophe (emela uRoberts) emi emagqabini amabili. Ngaphantsi kwakukho iileta ezimhlophe ABH ne-AMH. Oku kwakumi "iNtloko yeBarbadian" kunye ne "Head of Martinico".
UJohn "uCalico Jack" URackham wayenomsebenzi omfutshane kwaye ongenakuphandle wabapirate phakathi kuka-1718 no-1720. Namhlanje, ukhumbule ngokwenene ngenxa yezizathu ezibini. Okokuqala, wayenamaqebakazi amabhinqa emkhombeni wakhe: Anne Bonny noMary Read . Kwabangela ukuba ihlazo elithatyathwa ngabafazi beza kuthatha izibhokhwe kunye nama-glasslass kwaye balwe kwaye bafungele indlela yabo yobulungu obugcweleyo kwiinqanawa zepirate! Isizathu sesibini sasibhentshi esiphezulu sepirate: i-blackjack eyayibonisa ingqayi phezu kwamaglasi okusika. Nangona ukuba ezinye iinqwelo ziphumelele, ifulegi yakhe izuze igama "njengepirate".
Ngaba uqaphele ukuba abanye abantu babonakala nje bevakala njani kwindawo engafanelekanga yomsebenzi? Ngethuba leGold Age yobuPracy, uStede Bonnet wayengomntu onjalo. Umlimi ocebileyo waseBarbados, uBonnet wagula ngumfazi ogxekayo. Wenza okuphela kwento enengqiqo: wathenga iinqanawa, waqesha amanye amadoda waza wahamba ngomkhumbi ukuba abe yipirate. Ingxaki kuphela kukuba wayengazi umphelo omnye kwinqanawa kwenye! Ngethamsanqa, ngokukhawuleza wawela ngaphandle komnye u-Blackbeard ngokwakhe, owathi wabonakalisa i-alblubber ecebileyo iindophi. Iflegi yeBonnet yayimnyama ngekrele elimhlophe phezu kwethambo eliphakathi: ngapha nangapha kwekhayi kwakumdaka kunye nentliziyo.
U-Edward Low wayengumpirate onobukrakra obenomsebenzi omde kwaye uphumelele (ngemigangatho yeepirate). Wathabatha iinqanawa ezilikhulu kwiminyaka emibini, ukususela ngo-1722 ukuya ku-1724. Indoda enenkohlakalo, ekugqibeleni yamkhwelwa ngamadoda akhe kwaye yamisa kwisikhephe esincinci. Ifulegi yakhe ibumnyama kunye nesibhakabhaka esibomvu.
Biography kaJosé Martí
Ubomi bePirate Samuel "Black Sam" uBellamy
Tiger Woods Online (Indawo yeMidlalo ye-EA Sports)
Funda ukuqokelela isenzi sesiFrentshi esithi "Ukuhlamba" (ukubulala)
Konke Ngo-Egg-and-Dart Classical Ornamentation
Baphi Abaviwa bakaMongameli Bemi kwiSigwebo sokuQala?
Iimpawu Eziqabulayo Ngentliziyo Yakho
Kutheni Kuthiwa Iibhola ZasePing Pong Zitshisa?
ISt. Andrews University Admissions
Yintoni i-Formula yeCompile ye-Ethanol?
Indlela yokufometha nokubhala i-Letter Simple Business Letter
Ukusebenzisa 'iDonde' kunye neMigomo ehambelanayo